गण्डकीलाई एक महिना धान्ने इन्धन भण्डारण शिलान्यास | eAdarsha.com
गण्डकीलाई एक महिना धान्ने इन्धन भण्डारण शिलान्यास
शिलान्यास समारोहमा मन्त्री लेखनाथ भट्ट (बायाँबाट पहिलो) लगायत । तस्वीर: भीमपाणि बराल/आदर्श समाज
लेखनाथ, २७ कात्तिक । हरेक प्रदेशमा ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण क्षमताको डिपो निर्माण गर्ने नेपाल आयल निगमको पूर्व घोषित नीतिअनुसार पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखराको वडा नम्बर–२९ र ३० अन्तर्गत गगनगाैडामा पेट्रोलियम भण्डारण गृहको शिलान्यास गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा निर्माण हुन लागेका ५०/५० हजार लिटर क्षमताका २ डिजेल भण्डारण ट्याङ्कले गण्डकी प्रदेशको कुल खपतको माग ३० दिनसम्मलाई थाम्न सक्ने छ । जहाँ यसभन्दा पहिला आपूर्तिमा कुनै समस्या आए डिजेलमा ७ दिन र पेट्रोलमा २ दिनमात्र धान्ने सक्ने क्षमता थियो ।
गण्डकी प्रादेशिक डिपोमा भण्डारण क्षमता अभिबृद्धि हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको परियोजना अमलेखगञ्जपछि यहाँ नेपालकै दोस्रो ठूलो पेटोलियम भण्डारण गृह बन्ने भएकाले यो प्रदेशवासीको लागि सुखद कुरा हो ।
परियोजनाको एक समारोहबीच बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरे । उनले कोरोना महामारीबीच पनि अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा कुनै कमजोरी हुन नदिने बताए ।
उनले विगतमा नेपालमा भएको नाकाबन्दी, विनासकारी भूकम्प लगायत विषम परिस्थितिको बेला जनताले पाएको सास्तीलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले यो अभियान अघि सारेको बताए । उनले भने, ‘यो विकासको एउटा फड्को हो । छोटो समयमै जनताले विकास चाहेका छन् । परिणाम देखिने सरकार काम गर्न चाहन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।’ पेटोलियम पदार्थ सुरक्षा र विकाससँग जोडिएको विषय भएको हुँदा सरकारको यसमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने उनले बताए । उनका अनुसार देशका सातै प्रदेशमा यस्तै प्रकृतिको पेट्रोलियम भण्डारण बनाउँदै जाने बताए ।
७७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको सो परियोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले असामान्य अवस्थामा पनि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको अभाव हुन नदिने बताए । पोखरामा डीपो निर्माणपछि गण्डकी हवको रुपमा विकास हुने र काठमाडौंमा अभाव देखियो भने पनि त्यसको ब्याकअपको रुपमा आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले निर्धारित २ वर्षमै जर्मन प्रविधिबाट परियोजना सम्पन्न हुने दाबी गरे ।
नयाँ पहुँच सडक, २ लाख लि. क्षमताको पानी भण्डारण ट्यांक, डीपोको चमेनागृह, चालक तथा सुरक्षाकर्मी बस्न नयाँ संरचना निर्माण गरिनेछ । इन्धन भण्डारण ट्यांक र सोमा जडान हुने संरचना जर्मन प्रविधिमा आधारित पूर्ण स्वचालित हुनेछन् । डीजल लोड तथा अनलोड सुविधा पूर्णरुपमा स्वचालित र हाइटेक सुरक्षा प्रविधिमा आधारित हुने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
हाल डीपो रहेको कुल ७७ रोपनी जग्गालाई नै व्यवस्थापन गरेर निगमले पहिलो चरणमा ५० लाख लिटर क्षमताका दुई छुट्टाछुट्टै डीजल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गर्नेछ । करिब ७७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको सो परियोजना आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । परियोजनाको ठेक्का समानान्तर–रेलिगेयर–भारत ट्यांकस जेभीले पाएको छ । यो डीपो अमलेखगञ्जपछिको नेपालकै दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारणगृह बन्नेछ ।
नयाँ पहुँच सडक, २ लाख लि. क्षमताको पानी भण्डारण ट्यांक, डीपोको चमेनागृह, चालक तथा सुरक्षाकर्मी बस्न नयाँ संरचना निर्माण गरिनेछ । इन्धन भण्डारण ट्यांक र सोमा जडान हुने संरचना जर्मन प्रविधिमा आधारित पूर्ण स्वचालित हुनेछन् । डीजल लोड तथा अनलोड सुविधा पूर्णरुपमा स्वचालित र हाइटेक सुरक्षा प्रविधिमा आधारित हुने निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
यस्तै, नयाँ भण्डारणगृहमा २० हजार लि. क्षमताका ३२ देखि ४० ट्यांकरले दैनिक डीजल अनलोड गर्न सक्नेछन् ।